ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များ မောင်တောရှိ ပြန်လည်လက်ခံ? - Yangon Media Group
စစ်တွေ၊ မေ ၁- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံ ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရခိုင်ပြည် နယ်စစ်တွေမြို့နှင့် မောင်တောဒေ သသို့ နေ့ချင်းပြန်သွားရောက်လေ့ လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မေလ ၁ ရက်နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်တွင် ရန်ကုန် မှတစ်ဆင့်စစ်တွေသို့ လေကြောင်း ခရီးဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းမှတဆင့် မောင်တောဒေသ သို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် သွားရောက် ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုး ရအဖွဲ့မှ သိရသည်။
“”ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်းတွေနဲ့ လက်ခံမယ့် လူတွေထားရှိမယ့်နေရာတွေ သွား မယ်။ နောက်တခြားနေ ရာတချို့ ကိုလည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီကနေတစ်ဆင့် စစ်တွေပြန်လာ ပြီး ရန်ကုန်ကိုချက်ချင်းပြန်မှာပါ””ဟုရခိုင်ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မောင်တော မြို့နယ်ရှိ သစ်ဆုံးနားခွဆုံ၊ အိုး ထိန်း၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ၊ ငါးခူရ၊ လှဖိုးခေါင်၊ ရွှေဇားကျေး ရွာနှင့်ပန်းတော ပြင်ကျေးရွာများသို့လည်း သွား ရောက်လေ့လာခဲ့ကြကြောင်း ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ သိရသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကုလသမဂ္ဂဆိုင် ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင် ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်းပါဝင်သည့် အဆိုပါအဖွဲ့သည် စစ်တွေသို့ရောက် သည်နှင့် စစ်တွေလေဆိပ်ခန်းမ၌ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရတာဝန်ရှိသူ များနှင့်တွေ့ဆုံကာ ဘင်္ဂါလီအရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း လည်း သိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က ရောက်ရှိ နေခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အ တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်း အောင်လှိုင်တို့ အပါအဝင်နိုင်ငံတော် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ယင်း နေ့တွင်ပင် နေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံ ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရ သည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်သမားများ၏ဘဝကံကြမ္မာကို အလုပ်သမားထုကြီးက ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အခွင့်အ?
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း ပါဘက်အရှိန်ကြောင့် (၇၂) နာရီအတွင်း လေပြင်း တိုက်ခတ?